သော်တာသစ် ● ကျား-မ လူမှုရေးရာ (ဂျဲန်ဒါ) နှင့် မီဒီယာ (၁) – MoeMaKa Burmese News & Media
ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒ ကိစ္စရပ်များတွင် မီဒီယာကို ပြည်သူလူထုကို ပညာပေးရန်၊ သတင်းပေးရန်နှင့် မူဝါဒအသစ်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးရန်နှင့် ပြည်သူ့အသံဖော်ပြ၍ အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရားကို အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းရန် အစရှိသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသုံးပြုကြပါသည်။ စည်းရုံးရေး၊ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ရေးတွင် မီဒီယာသည် အဓိကကျသော ကြားခံချိတ်ဆက်ပေးသည့်အရာအဖြစ် ကောင်းစွာအကျိုးပြုပါသည်။ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ၊ မတူညီသော နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေးအုပ်စုအမျိုးမျိုး အပါအ၀င် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့တွင် ၎င်းတို့အပေါ် လူထုစိတ်ဝင်စားမှုနှင့် စိတ်ယိမ်းယိုင်မှုရှိစေရန် မီဒီယာကို အသုံးချ၍ လှုံ့ဆော်ကြသည်။ သည်တွင် မီဒီယာတွင် ဖော်ပြသော ရုပ်ပုံများ၊ အသုံးပြုသော စကားလုံးများ၊ သတင်းခေါင်းစဉ်များ၊ သတင်းနှင့် ဆောင်းပါး ဖွဲ့စည်းပုံများသည် စာဖတ်သူအပေါ် သက်ရောက်လွှမ်းမိုးမှု ရှိစေပါသည်။ ထို့အတူ ဂျဲန်ဒါကိစ္စရပ်တွင်လည်း မီဒီယာ၏ ဖော်ပြချက်များသည် ယခင် ရှေးရိုးစွဲ ကျား – မ ရေးရာနှင့်ပတ်သက်သော ပုံသေကားချပ် လူမှုအမြင်များကို ပို၍ခိုင်မာရန် တွန်းပို့နိုင်သလို အတွေးအမြင်အသစ်များ ထွက်ပေါ်လာရန် နှိုးဆွပေးနိုင်သည့် အခြေအနေလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ – အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် “အမျိုးသမီးတို့က အမျိုးသမီးတို့အတွက်” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် “Ms” မဂ္ဂဇင်း ပေါ်ထွက်လာသည်။ ထို့ပြင် ရေပန်းစားနေသော “ဣတ္ထိယ၀ါဒီ / ဣတ္ထိယ၀ါဒ” (Feminist/ Feminism) ဆိုသော စကားလုံးကို အခြားသောစကားလုံးများနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ (ဥပမာ – “Feminist-marriage”၊ “Feminist-Fashioned”၊ “Feminism-bras” စသည်တို့) တွင်တွင်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဣတ္ထိယ၀ါဒကို မြှင့်တင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးတို့၏ လိင်လွတ်မြောက်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရသော ကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း၊ ပြင်ပတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်နှင့် လစာ၊ ရာထူးခံစားခွင့် တူညီမျှရေးတို့ ရှေးရှုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ အမျိုးသမီးတို့ ဘ၀မြှင့်တင်ရေးအတွက် ဦးစားပေးလွန်းသည့်အတွက် အချို့သော ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းမှာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု အားနည်းနေပြီး ၀ိရောဓိဖြစ်သွားစေနိုင်သည့် အခါမျိုးလည်း ရှိပါသည်။ ဥပမာ – အောင်မြင်ထင်ရှား ကျော်ကြားသော အမျိုးသမီးတဦးကို စံပြအဖြစ် ပမာထားပြီး မီဒီယာက တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည် ဆိုပါစို့။ မေးခွန်းတွင် “ဒီလို အောင်မြင်လာတဲ့အခါ မိသားစုအရေးကို ဘယ်လိုထိန်းညှိသလဲ” ဆိုသည်မျိုး ပါလာတတ်သည်။ ထိုအခါ ထိုအမျိုးသမီးက အိမ်ထောင်ရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး ဟန်ချက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်နေရသည့် သူ့ဘ၀ကို ဖော်ထုတ်ပြောဆိုသည်။ တဖက်က ကြည့်လျှင် ထူးချွန်ထက်မြက်သည့် အမျိုးသမီးတဦး ဖြစ်ရေးမှာ “အိမ်ထောင်ရေးနှင့် လူမှုရေးတာဝန်များကိုပါ ကျေပွန်နေမှ” ဆိုသော အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်သည်။ ထိုသို့သော မေးခွန်းသည် အမျိုးသမီးတို့၏ မူလတာဝန်ဟု ယူဆထားခြင်းခံရသော အိမ်မှုကိစ္စတာဝန်များအပေါ် ဘယ်လောက်နိုင်နင်းအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ကို ဆန်းစစ်ရာရောက်သဖြင့် ရှေးရိုးစွဲပညတ်ကို ကျော်လွန်နိုင်စွမ်း မရှိသေးပါ။ အမျိုးသမီးတို့အတွက် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်လိုသော မီဒီယာကိုယ်နှိုက်ကပင်လျှင် ရှေ့ကို တွန်းသွားရင်း အဆမတန်သော မျှော်လင့်ချက်များဖြင့်၊ အမျိုးသမီးတို့သည် အရာရာကို ထူးထူးချွန်ချွန်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟု ပြလိုဇောများဖြင့် အမျိုးသမီးတို့၏ဘ၀ကို (စီးပွားရေးတွင် အောင်မြင်ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စနိုင်နင်းခြင်းစသော) ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးနှစ်ဆ ပိစေသော လမ်းကြောင်းကို မောင်းသွင်းလိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
ဣတ္ထိယဆန်အောင် ဘောင်သွင်းခြင်းနှင့် အစွန်းရောက်ဣတ္ထိယ၀ါဒ တို့၏ အားနည်းချက်များသည် အမျိုးသမီးတို့ကို အရင်းရှင်စီးပွားရေးအတွက် မီဒီယာက ပြဋ္ဌာန်းခံအဖြစ် အသုံးချရန်နှင့် ၎င်းကိုပင် အမျိုးသမီးတို့၏ လွတ်မြောက်ခွင့် (ဣတ္ထိယ၀ါဒအလွန် ၀ါဒ – Post-Feminism) ဖြစ်လာစေပါသည်။ အမျိုးသမီးတို့ အိမ်ပြင်ပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ ကိုယ့်အားကိုယ် ကိုး၍ ၀င်ငွေရှာဖွေခွင့်အတွက် တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုများကြောင့် အသေးစား၊ အလတ်စား၊ အကြီးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရုံး၊ဌာန တို့တွင် ပုံသဏ္ဌာန် အမျိုးမျိုးဖြင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ခွင့်ရလာသည်။ အမျိုးသမီးတုိ့ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရှိလာခြင်းကြောင့် ၀င်ငွေကို မည်သို့ခွဲဝေသုံးစွဲရန် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ချက်မှတ်နိုင်စွမ်း ပိုမိုလာသည်။ ဤအခြင်းအရာကြောင့်ပင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် မီဒီယာကတဆင့် အမျိုးသမီး စားသုံးသူများကို ပစ်မှတ်ထားသော ကြော်ငြာများနှင့် ကြော်ငြာဆောင်းပါးများ ထည့်သွင်းလာကြသည်။ အမျိုးသမီး ဖက်ရှင်၊ ရေမွှေး၊ အလှကုန်အမျိုးမျိုးတို့သည် အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းများ ရပ်တည်ရေးအတွက် အဓိကထားရသော ကြော်ငြာရှင်များ ဖြစ်လာသည်။ ထို့ပြင် အမျိုးသမီးတို့၏ ကောက်ကြောင်းအလှကို ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လွင်အောင်၊ တနည်း လိင်ဆွဲဆောင်မှု အားကောင်းသော ဟန်ပန်များနှင့် ဓာတ်ပုံများ ထည့်သွင်းကာ ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားအောင် ပြုလုပ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် မီဒီယာသည် အမျိုးသမီးတုိ့ကို လိင်အပြဋ္ဌာန်းခံ အရာဝတ္ထု (Sex Object) အဖြစ် ရှုမြင်စေရန် ဖော်ဆောင်ရာတွင် ပါဝင်ပတ်သတ်နေပါသည်။
ရှေ့တွင် ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း မီဒီယာသည် အစဉ်အလာကို ထပ်လောင်းအားဖြည့် ပုံသွင်းနိုင်သလို တဖက်ကလည်း လမ်းသစ်ပြရန် ရှေ့ဆောင်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ – လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပုံကားချပ်များကြောင့် လိင်အကြမ်းဖက်မှု မတိုးပွားစေဘဲ ကောင်းကျိုးပြုနိုင်သည့် နည်းလမ်းများရှိသည်။ အထူးသဖြင့် လိင်ပညာပေးခြင်းနှင့် လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ ကာကွယ်ရေးတွင် ထိုရုပ်ပုံကားချပ်များ အသုံးဝင်ပါသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ် အမေရိကန်နိုင်ငံ ရုပ်မြင်သံကြားများတွင် ဆန္ဒမပါဘဲ ရရှိလာသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ခုခံအားကျဆင်းသော ရောဂါများ ကာကွယ်တားဆီးရန် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြကွက်များ အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မည်သို့တင်ပြသည်၊ ဖော်ပြသည်၊ မည်သည့် ရုပ်ပုံနှင့် စာသား၊ စကားလုံးအသုံးပြုသည် စသည်တို့အပေါ် များစွာ မှီတည်နေပါသည်။ အောင်မြင်နေသော အမျိုးသမီးတဦးနှင့် မီဒီယာ အင်တာဗျူးတွင် “ဒီလို အောင်မြင်လာတဲ့အခါ မိသားစုအရေးကို ဘယ်လိုထိန်းညှိသလဲ” ဟု တိုက်ရိုက် မေးမည့်အစား “အမျိုးသမီးတဦး အောင်မြင်ဖို့ ဘယ်လို အခက်အခဲ ရှိသလဲ။ စိန်ခေါ်မှုတွေက ဘာလဲ။ ဘယ်လိုကျော်လွှားနေရလဲ။ ဘယ်လိုပံ့ပိုးမှုတွေ လိုအပ်သလဲ” စသဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မေးနိုင်လျှင် ၎င်းတို့၏ ခွန်အားနှင့် အစွမ်းသတ္တိကိုလည်းကောင်း၊ စိန်ခေါ်မှုကိုလည်းကောင်း၊ ထိုစိန်ခေါ်မှုကို ကျော်လွှားပုံ ကျော်လွှားနည်းတို့ကိုလည်းကောင်း သိရှိရပါလိမ့်မည်။ စာဖတ်သူ၏ စိတ်သန္တာန်တွင်လည်း စိတ်ဓာတ်ခွန်အား တက်ဖွယ်နှင့် တပြိုင်နက်တည်းမှာပင် ကျော်လွှားရန်လိုအပ်သော အစဉ်အလာ၏ ဖိနှိပ်မှုကိုလည်း သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသော ဘေဂျင်းညီလာခံတွင် အမျိုးသမီးတို့ အခွင့်အရေးအတွက် မီဒီယာ၏ အရေးပါမှုကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး မီဒီယာ၏ ဖော်ပြချက်များတွင် လိင်ခွဲခြားမှုနှင့် ကျား-မ လူမှုကဏ္ဍကို ပုံသေကားကျ ယူဆချက်များကို အားဖြည့်သော ဖော်ပြချက်များ တားဆီးရန်၊ ကျား-မ လူမှုရေးရာ မညီမျှမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ အမျိုးသမီးများကို ခွန်အားမြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့် ဖော်ပြချက်များ ထည့်သွင်းရန်၊ မီဒီယာလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးမျိုးသော အခန်းကဏ္ဍ၌ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ခွင့်ရစေရန်နှင့် မီဒီယာသမားများကို ကျား-မ လူမှုရေးရာ အကဲဆတ်သော သဘောတရားများ သတိပြုမိစေရေးအတွက် သင်တန်းပေးရန် စသည်တို့ ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဘေဂျင်းညီလာခံတွင်မူ မီဒီယာတွင် အမျိုးသမီးအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြချက်များကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် စီမံကိန်း Global Media Monitoring Project အတွက် ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ စောင့်ကြည့်ရာတွင် မည်သူတွေ သတင်းထဲတွင် ပါဝင်နေသည်၊ ၎င်းတို့ကို မည်သို့ ဖော်ပြခံနေသည်၊ မည်သည့်နယ်ပယ်တွင် ဖြစ်သည် (ဥပမာ – နိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများအကြောင်း ရေးသားမှုများပြီး၊ ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများအကြောင်း ရေးသားမှုပိုများနေသလား စသည်)၊ မီဒီယာတွင် ပါဝင်ပြောဆိုသူတို့က အမျိုးသမီးအရေးကို မည်မျှ စောင်းပေးသည်၊ မီဒီယာကလည်း မည်သည့်ရှုထောင့်ကနေ တင်ပြနေသည် အစရှိသည်တို့ကို ဆန်းစစ်ရန် ညွှန်ပြထားပါသည်။
Holland, P. (2004). The politics of the smile: “Soft news” and the sexualization of the popular press. In L. Steiner, & C. Carter (Eds.), Critical readings: media and gender (pp. 68-86). Maidenhead: Open University Press.
← အောင်ဝေး – ယ က် ဗ် တူ ရှ င် ကို အ တွ က် က ဗျာတ ပု ဒ်
ကမ်လူဝေး ● သင်္ကြန် →